တရုတ်ကားအ ၀ တ်လျှော်စက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံတွင်မြန်နှုန်းမြင့်သောတံတားငါးစင်း | CBK Carwash
1. ဂဟေဆော်ခြင်းကင်းဘောင်သည် dip dip galvanized သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်၎င်းသည်အတော်လေးကြာရှည်ခံနိုင်ပြီးခုခံနိုင်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
၂။ စက်သည် Brushes (၅) ခု၊ ထိပ်တန်း brush (၁) ခု၊ ဘေးဘက် brush နှစ်ခုနှင့်ဘီးနှစ်ချောင်းနှစ်ခုဖြင့်ကားကိုအပြည့်အ ၀ ဆေးကြောနိုင်သည်။
5.Hydrophobic Wax သည်ခြောက်သွေ့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။
6. စက်၌ဖြစ်ပျက်သောမည်သည့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်ကိုမဆိုပြသမည်။ သုံးစွဲသူများသည်ပြproblemနာကိုအချိန်တိုအတွင်းအလွယ်တကူရှာပြီးဖြေရှင်းနိုင်သည်။
၇.IP56 ရေစိုခံ၊ ဖုန်မှုန့်နှင့် shakeproof မော်တာနှင့် reducer သည်အီတလီအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်တာရှည်ခံပြီးစွမ်းအင်ချွေတာသည်။
စုတ်တံများသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့။ ဆေးသုတ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ကားကိုလုံးဝဆေးကြောနိုင်သည်။ ဆေးကြောခြင်းအပြီးတွင်စုတ်တံများသည်အလိုအလျှောက်လှည့ ်၍ ရေနှင့်အညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။
vechile တစ်လုံးကိုဆေးကြောရန်ပျမ်းမျှ ၃ မိနစ်ခန့်သာလိုသည်
vechile ကိုအပေါ်မှအောက်ဘက်သို့သန့်ရှင်းစေရန်ထိပ်တန်းဖြီး၊ ဘေးချင်းစုတ်တံများနှင့်ဘီးစုတ်တံများ အသုံးပြု၍ ကားတစ်စီးလုံးကိုလုံးလုံးရှင်းလင်းသည်။
၁ ။ CBKWash တပ်ဆင်မှုအတွက်လိုအပ်သောအပြင်အဆင်ပမာဏမှာအဘယ်နည်း။ (အလျား×အကျယ်×အမြင့်)
၂ ။ ကားသန့်ရှင်းဖို့ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ
၃ ။ သင့်အာမခံကာလဘယ်လောက်ကြာမလဲ။
CBK108 ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကို ၃ နှစ်အာမခံထားသည်
CBK208 နှင့် CBK308 စက်သည်သုံးနှစ်အာမခံ။
၄ ။ ၀ ယ်သူများအတွက် CBKWash သည်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ရောင်းချပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမည်သို့ပြုလုပ်သနည်း။
၅ ။ ပစ္စည်းကိရိယာများတပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီဖောက်သည်များသည်မည်သည့်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သနည်း။
1. 5-3 တန်ချိန်သိုလှောင်မှုပုံးကိုပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။
၆ ။ 10။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လောက်လဲ။
ကွန်တိန်နာများကိုသင်္ဘောဆိပ်မှပို့ဆောင်ခြင်း၊ EXW၊ FOB သို့မဟုတ် CIF တို့ဖြစ်နိုင်ပြီး၊ စက်တစ်ခုလျှင်ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်မှာဒေါ်လာ ၅၀၀ မှ ၁၀၀၀ ၀ န်းကျင်ရှိသည်။ (ဆိပ်ကမ်း Dalian ကိုပို့သည်)